तेमालमा जारी फुटबल प्रतियोगिताको फाईनलमा वडा नं ८ र ९ ! – Radio Roshi
तेमालमा जारी फुटबल प्रतियोगिताको फाईनलमा वडा नं ८ र ९ !
in खेलकुद / रोशी खबर — by Roshikhabar —	February 7, 2020
तेमाल गाँउपालिकामा भएको अध्यक्षकप अन्तर वडा फुटबल प्रतियोगिताको आज दाश्रो दिन ३ खेल भएका छन् । आज वडा नं ८ र २ बिच भएको खेलमा २–१ गोल अन्तरले वडा नं ८ बिजयी भएको छ । वडा नं ८ का कुन्साङ लामा (जर्सी नं १७) र मिङमा लामा (जर्सी नं ३) ले वडा नं ८ का लागि १–१ गोल गरेका हुन् । जवाफमा वडा नं २ का उपेन्द्र तामाङ (जर्सी नं ८) ले १ गोल गरेपनि खेलमा गति लिन नसक्दा फईनलको यात्रा गुमाउनु परेको हो ।
त्यस्तै अर्कोे खेलमा वडा नं ४ र ९ बिच प्रतिश्पर्धा भएको थियो । जसमा १–० गोल अन्तरले वडा नं ९ बिजयी भएको छ ।
त्यस्तै अर्को खेल वडा नं ९ र ५ बिच भएको मा २–१ गोल अन्तरले वडा नं ९ बिजयी भएको गाँउपालिकाका प्रवक्ता ज्ञान बहादुर तामाङले जानकारी दिए । खेलमा वडा नं ८ र ९ फाईनल प्रवेश गरेका छन् । भोली हुने फाईनल खेल दिँउसो २ बजेबाट सुरु हुने संयोजक एवं प्रवक्ता लामाले जानकारी दिए ।